Noorweey oo sheegtay in xirriir kala dhaxeeyo laanta socdaalka Soomaaliya | Somaliska
Hey’adda socdaalka dalkaasi Noorweey ayaa shaaca ka qaaday in xirriir wada shaqeeyn uu kala dhaxeeyo waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya. Hey’adan ayaa sheegtay in laanta ka teegeerto howlaha la xirriira dib u dhiska iyo nidaamka heey’adaasi.
Knut Holm oo hey’adda socdaalka Noorweey ka tirsan oo kana mid ahaa mas’uuliyiintii Noorweey ee toddobaadkii hore kulan la qaatay sooomaalida dalkaasi, ayaa sheegay in howlo kala duwan oo kaalmeeynta Noorweey ugu talagashay Soomaaliya ay qeyb ka yihiin tabaraddan eey siiyaan shaqaalaha laanta socdaalka.
Dhinaca kale wuxuu sheegay isagoo la hadlaya shabakadda Nor-Som in Noorweey aanu heshiis la gelin Soomaaliya dib loogu celinayo qaxootiga soomaalida, balse wuxuu qiray in sanadkan aynu ku jirno ay dad gaaraya toddobo ruux si qasab ah ugu celiyeen.
Ugu dambeyntiina waxaa uu xusay in uu jiro qorsho dhaqaale lugu taageerayo shaqsiyaadka iskood u doonaya ineey dib ugu laabtaan Soomaaliya. Qorshahan ayuu sheegay ineey ay kala kaashaneeyso hey’ad daanish oo qaabilsan qaxootiga lana yiraahdo Denish Refugee Council.